Posted by တန်ခူး at 2:53 PM
I hate stress also. everyone hate stress.
အမ ၀မ်းသာပါတယ် stress တွေဝေးသွားပီး နေကောင်းသွားလို့။
အဲ့ဒီ stress ဆိုတဲ့ သတ္တ၀ါက ကျနော်ကြောက်တယ် မလာပါနဲ့ ဗျာ ဆိုရင် သူက ပိုပိုဆိုးလာတယ် ခေါင်းပေါ်ထိတက်တယ်ဗျး) လာစမ်းကွ မင်းလား ငါလားဆိုပြီး လည်ပင်းတက်နင်းပစ်လိုက်တယ် ဒင်းလား ဘယ်ခံနိုင်တော့မလဲပြေးကောပေါ့ ။ နောက်တစ်ခါလာကြည့် အိမ်ပေါက်ဝကနေ ဓားမကိုင်ပြီးစောင့်နေမယ် ...လာအုံးမှာပါပဲ သူက လူသွေးစုပ်တဲ့ ဖုတ်ကောင်လိုပဲ ။၀မ်းသာပါတယ် stress တွေဝေးသွားပြီဆိုလို့...။
Stress ဘယ်လောက်ကြီးကြီး ဘီယာနဲ့တွေ့ရင် ပြေးတော့တာဘဲ။ နည်းမှန်လမ်းမှန်တော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့…..အဟီး။ နည်းမှန်လမ်းမှန်ဖြစ်တဲ့ ဦးဇောတိက တရားလေး နာမယ်လုပ်တော့ကျတော့ ငါးမိနစ်တောင် မကြာဘူး။ ဟောက်သံထွက်သွားတော့တာဘဲ။ အင်း…. ပုထုဇဉ်…ပုထုဇဉ်…။
we r working... (with stress)
နောက်ဆုံရအုံးမယ် ထင်တာပဲနော... :)
stress နှင့်ဝေးသွားသော မတန်ခူးကို လက်ကမ်းကြိုဆိုပါ၏ ။ ညီမလည်း မကြာသေးခင်ကပဲ သူ့ ကို လက်ပြနှုတ်ဆက်ခဲ့တား)
မတန်ခူးရေ.. stress ရပြီဆိုရင် ထမင်းဖြောင့်ဖြောင့်မစားနိုင်ရတာနဲ့ ကောင်းကောင်းမအိပ်ရတာနဲ့။ ကျနော်ကတော့ တစ်နှစ်တိတိ အဲဒီဒုက္ခခံရဖူးတော့ ကိုယ်ချင်းစာတယ်။ Stress လည်းကင်းရော လူက စားဝင်အိပ်ပျော်ပြီး ၀ လာတော့တာပေါ့။ အခုတော့ ရံဖန်ရံခါလောက်ပဲ ခံစားရတော့တယ်။ အချိန်တန်တော့လည်း ပြီးသွားတာပါပဲနော်..မ။
မတန်ခူး ပြန်လာတာကို ကြိုဆိုပါတယ်... Stress တွေမရှိတော့ဘူးဆိုတာ ဒီပို့စ်လေးနဲ့ သက်သေပြလိုက်တာလား အမ? :)
ရေးထားတာလေးက ကောင်းလဲကောင်း၊ မှန်လဲ မှန်ပါ့။ ဘယ်သူမှတော့ stress နဲ့ မကင်းနိုင်ကြဘူး ထင်တာပဲ။ သူလာရင် ကိုယ့်စိတ်ကို ဘယ်လို ပြင်ဆင်မလဲ၊ ဘယ်လို နေတတ်အောင် ကြိုးစားမလဲပဲ စဉ်းစားရမှာ။ အမလဲ ခုထိတော့ သူဖိထောင်းသွားရင် ခံနေရတုန်း။
ကိုယ်တိုင်လဲ Stress ပိနေတဲ့ အချိန်တွေမှာ ဘာကိုမှ လှည့်မကြည့်နိုင် စိတ်မ၀င်စားနိုင် စိတ်ကလဲ အလိုလိုနေရင်း ဒေါသပွချင်နေတာမို့ကောင်းကောင်း ကိုယ်ချင်းစာနိုင်ပါတယ်။
အခုတော့ နဲနဲ ဝေးနေပေမယ့် သူက ပေါ်လိုက် ပျောက်လိုက်နဲ့လူကို အမျိုးမျိုးလဲ လှည့်စားတတ်သေးတယ်လေ။
ရေးထားတာ အရမ်းကောင်းတယ် တန်ခူးရေ...။
Stress ကတော့ တိုးတက်လာတဲ့ ခေတ်နဲ့အပြိုင် လူတွေအားလုံးမှာ ရှိနေကြတာပဲ အမရေ။ ကျောင်းသားလည်း Stress ၊ အလုပ်လုပ်သူတွေလည်း Stress အကုန်လုံး ရှိနေကြတယ်။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် Stress ဖြေပုံချင်းမတူတော့ ကိုယ်ကြိုက်တာလုပ်ပြီးရင်တော့ တော်တော် သက်သာသွားမယ်လို့ ထင်မိပါတယ်။ တခါတလေ Stress တအားများသွားရင် စားမ၀င် ၊ နေလို့မပျော်နဲ့ တော်တော်ဆိုးရွားပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် စိတ်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုများ ကင်းဝေးစွာ ပျော်ရွှင်ကြပါစေရှင် :)
stress တွေ ကင်းဝေးနိုင်ပါစေဗျာ
အဲဒီစကားလုံးကို ဒီရောက်မှ ပိုပြီး ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ခဲ့။ မြန်မာပြည်မှာတုန်းကလည်း ဖိစီးမှုတွေတော့ ရှိမှာပေါ့လေ။ ကိုယ့်မိသားစု အသိုင်းအ၀ိုင်းနဲ့မို့ ဖြေဖျောက်နိုင်တာလား ဘာလို့လည်းတော့ မသိဘူး။ ဒီမှာတော့ အလုပ်ထဲမှာ မလိုလားအပ်တဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုတွေ ပေါ်ပေါ်လာတာတော့ အမှန်ပဲ။ တနှစ်တခါလောက်မှာ စိတ်ဖိစီးမှု ဖြေဖျောက်ဖို့ သင်တန်း တစ်ရက်တော့ လာလာပို့ချပါတယ်။ အဲဒီမှာ တက်ဖို့ မေးခွန်းတွေ ဖြေကြည့်ပြန်တော့လည်း သင်တန်းတက်ရလောက်တဲ့အထိ ဖိစီးမှုမများဘူးလို့ ပြနေပြန်ရော။
လူတွေမှာ အားကစား ရုပ်ရှင် စတဲ့ ကိုယ်နှစ်သက်ရာ ပြင်ပ ထွက်ပေါက်တခုခု ရှိမှဖြစ်မယ်။ လောလောဆယ်တော့ ဘလော့ထဲထွက်ပြီး ရေးချင်တာရေးရတာ စိတ်ပြေပျောက်စရာပါ။ ဘလော့ထဲမှာပါ ဖိစီးမှုတွေ ထပ်ပါလာရင်တော့…။
Stress ဆိုတာက မရင်းနှီးကောင်းတဲ့ အရာပေါ့။ ဒါပေမယ့် တခါတလေတော့လဲ သူ့ကို မချစ်သော်လည်း အောင့်ကာနမ်းနေရတယ်။ မဖိတ်ဘဲနဲ့ ရောက်လာတတ်တာကိုး။ ကိုပေါပြောသလိုပဲ...၊ တခါတလေကျရင်တော့ ဘီယာလက်နက်နဲ့ stress ကို မောင်းထုတ်ရသလို၊ တခါတလေကျရင်တော့ သီချင်းတွေနဲ့ အော်ထုတ်ရတယ်။ စိတ်လိုလက်ရ ရှိလာတဲ့ အခါကျရင်တော့ စာလေးဘာလေးရေးပြီး ညင်ညင်သာသာလေး တွန်းထုတ်လွှတ်ရပြန်တယ်။
ကျေးဇူးပါမြတ်နိုးရေ… stressဆို အမြဲbye byeချင်တယ်…
ဟုတ်တယ်မောင်မျိူးရေ… မြို့ မေတ္တာခံယူတဲ့stressလေ…
ဘီယာတော့ အနံ့ တောင်မခံနိုင်ဘူး ကိုပေါရေ… အခြေခံစိတ်ဓါတ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ဟောတဲ့ ဆရာတော်ဦးဇောတိက တရားတွေကဲ့stressခံစားနေရသူတွေ အတွက် အကောင်းဆုံးဆေးပါ….
ကိုတားမြစ်ထားသောရေ… နောင်ဆုံရဦးမှာတော့ အမှန်ပဲ…
ကျေးဇူးပါဂျစ်ရေ… တို့ တွေဘ၀ကတော့ သူနဲ့ ရန်ဖြစ်လိုက် ပြန်ချစ်လိုက်နော်…
နုရေ… ကြာလာတော့ stressနဲ့ ယဉ်ပါးသွားကြတာနော်…
မ ရေ.. ကျေးဇူးပါ.. ဟုတ်တယ် တခါတခါ အရှိုက်ဝင်ထိုးသွားတတ်သေး…
ကျေးဇူးပါသက်ဝေရေ… ပေါ်လိုက်ပျောက်လိုက်… အမှန်ပဲနော်…
လင်းလက်ရေ… မတွေ့ တာကြာပြီနော်… လင်းလက်နဲ့ တူတူ ဆုတောင်းပေးလိုက်တယ်…
ပေးတဲ့ဆုနဲ့ပြည့်ပါစေ ကောင်းကင်ကိုရေ…
ဟုတ်တယ်ပန်ရေ… ဒီblogလေးရှိနေတာကိုက stressဖြေလျော့နည်း တမျိုးနော်…
ချော့တခါ ခြောက်တလှည့် ဆိုတာမျိူးလား ကိုစေးထူးရေ…